आलियाको ‘गंगुबाई काठियावाडी’ले ६ दिनमा कति कमायो ? « News24 : Premium News Channel
आलियाको ‘गंगुबाई काठियावाडी’ले ६ दिनमा कति कमायो ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको फिल्म ‘गंगुबाई काठियावाडी’ दर्शकमाझ रिलिजमा आएको ६ दिन भइसकेको छ । यो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्शन गरिरहेको ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले जानकारी दिएका छन् । कोरोना महामारीपछि दर्शकमाझ रिलिजमा आएको अभिनेत्री आलियाको ‘गंगुबाई काठियावाडी’ले छैटौं दिन ६.२१ करोडको कलेक्शन गरेको छ ।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शका अनुसार यो फिल्मले छ दिनमा ६३.५३ करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गर्न सफल भएको छ । यो फिल्म छैटौं दिन (बुधबार) मात्रै ६.२१ करोडको कलेक्शन गरेको थियो । गंगुबाई काठियावाडी १०० करोडतर्फ बढिरहेको छ ।
तरण आदर्शका अनुसार यो फिल्मले गत शुक्रबार १०.५० करोड, शनिबार १३.३२ करोड, आइतबार १५.३० करोड, सोमबार ८.१९ करोड, मंगलबार १०.०१ करोड र बुधबार ६.२१ करोड गरी छ दिनमा कुल ६३.५३ करोडको बक्सअफिस कलेक्शन गरेको हो ।
फिल्मको बक्स अफिस आँकडा सेयर गर्दै तरण आदर्शले ट्वीट गरेका छन्, ‘छैटौं दिनसम्म फिल्म सोलिड बनिरह्यो । यदि, दोस्रो साता पनि यस्तै बलियो कलेक्शन गरिरह्यो भने यो पोस्ट प्यान्डामिक १०० करोड कमाउने चौथो फिल्म हुनेछ । यस अगाडि सूर्यवंशी, ८३ र पुष्पाले १०० करोड क्लवमा इन्ट्री पाएका थिए । अहिले आलियाको फिल्मले जुन किसिमले कमाई गरिरहेको छ, यसलाई नियाल्दा यो फिल्म चाँडैनै १०० करोड क्लवमा सामेल हुनेछ ।’
यो फिल्ममा अभिनेत्री आलियाले गंगुबाईको भूमिकालाई जीवन्त गरिदिएकी छन् । सञ्जय लिला भंसालीको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म आलियाको करियरको लागि बरदान सावित भएको छ । आलियाको आगामी फिल्महरुमा ब्रह्मास्त्र, राँकी और रानीकी प्रेम कहानीलगायत छन् ।